वासिङ्टन, २८ पुस। संयुक्त राज्य अमेरिकाले सिरियाबाट सैनिक नभएर अन्य उपकरणहरु फिर्ता गर्न लागेको जनाएको छ । यसअघि अमेरिकाले सिरियाबाट आफ्नो सैन्य सदस्यहरु नै फिर्ता गर्न लागेको बताइएको थियो ।
ती सैनिकले ती क्षेत्रमा विशेषगरी सिरियामा त्यहाँका राष्ट्रपतिको बहिर्गमनको माग राखेर आन्दोलन गरिरहेको विपक्षी समूहहरुको संरक्षण तथा इस्लामिक जिहादीहरुका विरुद्धमा कारबाही गर्ने गर्दछ । रासस
गोरखाको लिगलिगकोटमा राखियो ६० फिट भन्दा अग्लो राष्ट्रिय झण्डा !
सिंहदरबारमा सफाइ अभियान ! उपत्यकाबाट ३३ मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन